Homeसमाचारकेही समय पहिले यसरी भएको थियो अन्जना लामाको फोटोसुट, अब सम्झनामा मात्र रह्यो !
May 15, 2019 Spnews समाचार Comments Off on केही समय पहिले यसरी भएको थियो अन्जना लामाको फोटोसुट, अब सम्झनामा मात्र रह्यो !
केही दिन पहिले ललितपुरको ढोलाहिटी निवासी ३५ वर्षीय उज्ज्वल महत (जेठाजु) ले २५ वर्षीया अन्जना लामा (बुहारी)लाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे । अन्जना लामा महतको हत्या हुनु भन्दा केही समय पहिले फोटो सुट गरेको भिडियो बाहिर आएको छ । अन्जना लामा महको हत्या उनकै घरको कोठामा जेठाजुले खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । बीभत्स हत्या पछि अन्जनाको परिवार अहिले शोकमा डुबेको छ ।
यसै घटना लाई लिएर फरक फरक कुराहरू मिडियामा आइरहेका छन् ।ललितपुर महानगरपालिका-२६ ढोलाहिटी बस्ने २५ वर्षीया अञ्जना लामा महतलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा मृतकका आफ्नै जेठाजु ३५ वर्षीय उज्वल महतलाई बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हाे।
बिहिबार दिउसो ललितपुरको ढोलाहिटस्थित भाईबुहारी २५ बर्षिय अन्जना लामाकाो ३५ बर्षिय उज्वल महतको हत्या गरेको महानगरिय प्रहरी बृत चापागाउँले जानकारी दिएको छ । हत्याको आरोपी उज्जल महतले प्रहरी समक्ष आत्मसर्मपण गरेका छन् । हत्या कसरी भयो भन्ने विषायमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी सहायक निरिक्षक राजेश देवकोटाले बताए् ।
अब सम्झनामा मात्र रह्यो !
केही समय पहिले यसरी भएको थियो अन्जना लामाको फोटोसुट